I-beta yesixhenxe ngoku iyafumaneka kubaphuhlisi be-watchOS 8, tvOS, iOS kunye ne-iPadOS 15 | IPhone iindaba
Kwiveki ephelileyo iApple yasungula ibetas yesithandathu kubaphuhlisi beenkqubo zabo ezintsha zokusebenza. Nangona bengakhange babandakanye iindaba ezimnandi, bachaze ukuba inguqulelo yokugqibela esiza kuyibona ekwindla izakuba njani kwaye zeziphi iindaba ezinokufika kuhlobo lwamva. Kwiiyure ezimbalwa ezidlulileyo, UApple ukhuphe i-beta yesixhenxe yabaphuhlisi Zonke iinkqubo zakho ezintsha zokusebenza. Phakathi kwazo kukho I-tvOS 15, i-watchOS 8, i-iOS 15, kunye ne-iPadOS 15. Ukuba ungumphuhlisi kwaye unefayile efakwe kwisixhobo sakho, ngoku unokuhlaziya kwaye ukonwabele iindaba kule beta intsha.
Iveki entsha, ii-betas ezintsha: i-beta yesixhenxe yabaphuhlisi ngoku iyafumaneka
U-Apple uyaqhubeka nesicwangciso sokumiliselwa kwe-beta ngaphakathi kwenkqubo yonjiniyela. Kwiiveki ezimbalwa ngoku, ukwaziswa bekuqhubeka embindini weveki kwaye kwiintsuku kamva ingxelo efanayo isungulwe phantsi kwe-beta yoluntu. Nangona kunjalo, kubonakala ngathi isantya se-betas yoluntu siyakhawuleza kwaye I-Apple ifuna ukugcina kunye nabaphuhlisi kunye nabasebenzisi ababhalise kwi-beta yoluntu.
La yesixhenxe beta Abaphuhlisi beewatchOS 8, tvOS, iOS kunye ne-iPadOS 15 ngoku iyafumaneka Ukuhlaziya i-iPad kunye ne-iPhone ngokulula ukufikelela kwiisetingi zesixhobo kwaye, kunye neprofayili yonjiniyela efakiweyo, uhlaziye ngaphandle kwentambo. Nje ukuba inguqulelo entsha ifakwe kwi-iPhone, singaya kwi-Clock app kwaye sifake ingxelo entsha ye-watchOS 8. Okokugqibela, ukuvuselela i-Apple TV yethu kuya kufuneka siyenze ngokukhuphela iprofayile kwiwebhusayithi esemthethweni ye-Apple kunye nokufaka ngokusebenzisa iXcode.
Si Ubhalisile kwiNkqubo yee-Betas zikaRhulumente ze-Apple unethamsanqa kuba kukhutshiwe inguqulelo entsha yeenkqubo zokusebenza. Ukuyihlaziya, vele ungene kwi 'Software Updates' kwiNkqubo yoseto yesixhobo sakho. Kwiiyure ezimbalwa ezizayo siza kupapasha utshintsho olukhulu oluvele kule beta yesixhenxe kubaphuhlisi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iOS » iOS 15 » I-8th beta ngoku iyafumaneka kubaphuhlisi be-watchOS 15, tvOS, iOS kunye ne-iPadOS XNUMX
I-Apple TV kunye neMac ayitsali ingqalelo yabasebenzisi be-iOS